समाचार – Nepal Online Khabar
धनगढी : कैलालीको कर्णाली चिसापानी पुलबाट एक युवक बे’पत्ता भएका छन्। जिल्लाको ल’म्किचुहा नगरपालिका–२ का १८ वर्षिय सञ्जय खड्का कर्णाली नदीमा बे’पत्ता भएका हुन्। उनले शनिबार दिउँसो कर्णाली पुलबाट हा’म फा’लेको कैलाली प्रहरीले जनाएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीका अनुसार १८ वर्षीय लोकेश प्याकुरेल घा’इते भएका छन्। लम्किचुहा–१ का प्याकुरेललाई नेपालगञ्ज उप'चारका लागि लगिएको छ। उनको छातीमा चो’ट लागेको छ। उनीहरुसँगै नदीमा हा’म फा’लेका १७ वर्षीय वीरेन्द्र सिंहको अवस्था भने सामान्य छ। उनीहरु सबै एकै विद्यालयका कक्षा १० का विद्यार्थी हुन्। उनीहरू शनिबार(आज) ८ जनाको स’मूहमा चिसापानी गएका प्र'हरीले बताएको छ। चिसापानीको पुलमा टिकटक बनाउनेको दैनिक भी’ड लाग्ने गर्छ। तर उनीहरुले भिडियो नबनाएका प्र'हरीले बताएको छ। उनको खोजी कार्य जारी रहेको प्र'हरीले जनाएको छ।
काठमाडौं : नेपाली सेनाले घाँटीबगर इलाकामा कडाचट्टान रहेको भीरमा ४६० मिटर गोरेटो बाटो निर्माण गरेको छ।यही भदौ मसान्तभित्रै ५५० मिटर उक्त गोरेटो बाटोको ट्ययाक खोलिसक्ने सेनाको तयारी छ’ । भारतले सडक निर्माणका क्रममा अ’वरुद्ध रहेको घाँटीबगर क्षेत्रमा बाटो ’अवरुद्धहुँदा व्यासको छांगरु र तिंकरका बासिन्दालाई आवतजावत गर्न स’मस्या थियो ।गत जेठ ९ गतेदेखि नेपाली सेना परिचालन भएर यो क्षेत्रमा गोरेटो बाटो निर्माणको कार्य अघि बढाइएको हो । यो बाटो खुलेसँगै व्यासका बासिन्दालाई जोखिमपूर्ण मानिएको क्षेत्रमा बाटो सहज हुनेछ।’ व्यासको छांगरु र तिंकरका बासिन्दालाई कार्तिक महिनामा खलंगा कुञ्चा झ’र्नसमेत सहज हुनेछ । व्यासको छांगरुमा ११७ र तिंकरमा ८७ घरधुरीको बसोबास छ । छिटो भन्दा छिटो काम सक्ने गरी सेनाले घाँटीबगरमा काम गरिरहे पनि मौसम प्रतिकुल नहुनु र कडा चट्टानी भूगोल भएका कारण निर्माण कार्यमा केही ढिल
कतार एयरवेजले गर्यो को’भिड–१९ खो’पयुक्त उडान सञ्चालन !
दोहा : कतार एयरवेजले विश्वको पहिलो पू'र्णतया को'भिड–१९ खो'पयुक्त उडान स'ञ्चालन गरेको छ । केवल खो'प लगाएका चालक दल तथा यात्रुहरू बोकेको क्यू'आर ६४२१ को जहाज ११ बजे हमाद अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट प्रस्थान गरेको थियो । जहाँ यात्रुहरूलाई चेक–इनमा पनि खोप लगाएका कर्मचारीहरूले सुरक्षा जाँच गरेको एयरलाइन्सले जनाएको छ । उक्त उडान अपरान्ह २ बजे दोहा फर्किएको हो । एयरलाइनले बोर्डमा सुरक्षा र स्वच्छताको मापद'ण्डहरू सुनिश्चित गर्नका लागि राखेका सबै उपायहरू अपनाएको जनाएको छ । जसमा विश्वको पहिलो ‘जिरो टच’ मनोरञ्जन प्रविधि समावेश रहेको पनि कम्पनीले जनाएको छ । -काठमाडौ २४ को'रोनाको दोस्रो लहर : शैक्षिक संस्था होला त ब'न्द ? स्वास्थ्य मन्त्रालयले शैक्षिक संस्थामा प्रत्यक्ष पठनपाठन ब'न्द गर्न सिफारिस गरेको छ । एकैदिन १८ वर्षमुनिका ५१ जना बालबालिका सं¥क्रमण भएपछि बालबालिका को'रोनाको उच्च जो
काठमाडौं : ‘भिजन एक्सिलेन्स अवार्ड २०२०’ बाट डा. सन्दुक रुइतसहित ३ जना नेत्र'रोग विशेषज्ञ सम्मानित हुनुभएको छ । साथै,नेपाल आँखा अस्पताल तथा नेपाल नेत्रज्यो'ति संघका संस्थापक प्रा.डा .रामप्रसाद पोखरेल र नेपाल आँखा अस्पतालका अध्यक्ष डा.गोपालप्रसाद पोखरेलले पनि भिजन एक्सि'लेन्स अवार्ड २०२० प्राप्त गर्नुभएको छ । तिलगंगा अस्पतालको संस्थापक रहनुभएका डा. रुइत मो'तिबिन्दु श'ल्यक्रि'याका लागि प्रख्या'त हुनुहुन्छ । डा. रुइत म्याग्सेसे पुरस्कार बिजेतासमेत हुनुहुन्छ । डा.रुइतले हजारौँ नेपाली र विदेशी नागरिकको गु'मेको दृ'ष्टि फ'र्काउनुभएको छ । उहाँले दृष्टि फर्काउने अभियान दु'र्गमसम्म पु¥र्याउनुभएको छ । डा. रुइतलाई यस वर्षको मानपदवी ‘सुप्रसि'द्ध प्रबल जनसेवा श्री (प्रथम)’ पदकबाट वि'भूषित गरिदैछ । यसैगरी आँखा अस्पतालका अध्यक्ष डा.पोखरेलले नेपालको आँखा स्वास्थ्य क्षेत्रमा ठूलो योगदान पु्या¥